कोरोना जित्ने विकासानन्दका ७ टिप्स भन्छन्ः यो जीवन बदल्ने स्वर्णकाल हो
दिनेश गौतम काठमाडौं, ९ चैत
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) विश्वभर फैलिएपछि सतर्कता अपनाइएको छ । अत्यावश्यक कामबाहेक अरु बेला घरबाट बाहिर ननिस्न सरकारले आह्वान गरेको छ ।
कोरोनाको त्रास र डरले मान्छेमा मानसिक असरसमेत परेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी संयमता अपनाउने ? कोरोनाबाट कसरी जोगिने ? यो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्ने ? खुसी हुन के गर्ने ? भाइरसको स्थायी समाधान के हुन सक्छ ?
यिनै विषयमा हामीले डा. योगी विकासानन्दलाई सोधेका छाैँ । प्रस्तुत छ डा. याेगीका विचारहरू:
डब्लूएचओको सन्देश अस्थायी
यहाँ दुईवटा कुरा छन् । एउटा बाहिर देखिने र अर्को सूक्ष्म कुरा छ । बाहिर देखिने भनेको डाक्टर वा डब्लूएचओले जारी गरेको सन्देश । हात धुने, क्वारेन्टाइनमा बस्ने, मान्छेको भीडबाट टाढा रहने । सबैले फलो गर्ने यिनै कुरा हुन् ।
तर, यो पूर्व सतर्कता मात्र हो । हामीले स्थायी रूपमा समाधान खाेज्नु आवश्यक छ । मेरो भनाइ के हो भने भाइरसलाई मार्ने औषधि दुनियाँमा अहिलेसम्मै बनिसकेको छैन ।
भाइरसलाई मार्ने हाम्रै रगतले हो
भाइरसलाई मार्ने भनेको हाम्रै रगतले हो । शरीरमा नेचुलर किलर ‘एनके’ हुन्छ । त्यसको संख्या बढ्यो भने भाइरस भए पनि फरक पर्दैन ।
कोरोना मात्र होइन, पहिले जिका भाइरस, इभोला भाइरस आयो । पछि अर्को आऊला । यी भाइरसलाई मार्ने तत्त्व हाम्रै रगतभित्र छ । त्यो रगतलाई बुस्ट गर्नुपर्‍यो । हाे, त्योचाहिँ स्थायी समाधान हाे ।
लाइफ स्टाइल चेन्ज गरौँ
बुस्ट गर्नका लागि हामीले लाइफ स्टाइल चेन्ज गर्नुपर्छ । हाम्रो लाइफ स्टाइल पोजिटिभ बनाउन सकेनौँ । चिन्ता बढी गर्छौं । सकारात्मक छैनौँ । हामी सकारात्मक भएनाैँ भने हाम्राे इमिन्यु सेल्स मर्दै जान्छ ।
इमिन्यु सेल्स कम हुँदै गएपछि भाइरसले आक्रमण गर्छ । इमिन्यु सेल्स बढाउने भनेको पोजिटिभ भएर हो । पोजिटिभ कसरी बन्ने भनेर सिक्नु पर्‍यो । नेटेगिभ भएर बाँच्ने होइन ।
नेगेटिभ कुराको व्यापार बन्द गरौँ
बजारमा नेगेटिभको व्यापार भएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यममा नेगेटिभको व्यापार हुन्छ । नेगेटिभ व्यापारबाट सतर्क हुनुपर्‍यो । नेगेटिभ कुराको व्यापार बन्द गर्नुपर्‍यो ।
नेचुरल फुडको प्रयोग
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकाे भोजन हो । अहिले जङ्क फुड खाने धेरै छन् । यसले हाम्रो शरीरलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले नेचुरल फुडमा आउनुपर्‍यो । हामीले नेचुरल फुड खायाैँ भने भाइरससँग लड्ने तागत आउँछ ।
नेचरसँग कनेक्ट हुने
हामी नेचरबाट टाढा भएका छौँ । नेचरसँग टाढा हुनु भनेको शरीर कमजोर बनाउनु हो । हामी नेचरसँग नजिक हुनुपर्‍यो ।
घाम, पानी, शुद्ध हावा, खुला आकासमा बस्ने । जसले आनन्द दिलाउँछ । नेचरसँग रिकनेक्ट गरियो भने इमिन्युटी सिस्टम बढ्छ । अनि खुसी र आनन्दलाई बुस्ट गर्नुपर्छ ।
कोरोनाका कारण घरमै के गरेर बस्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । यो समयलाई हामी भरपूर सदुपयोग गर्न सक्छौँ । अहिलेसम्म कोरोनाका कारण बच्चा मरेको खबर आएको छैन । यसको कारण भनेको बच्चा खुसी हुन्छन् । त्यसैले अब सबै बच्चा बन्नुपर्‍यो ।
यो समयमा घरमा बसेर हाँस्ने, नाच्ने, गाउने, मेडिटेसन गर्ने, प्राणायाम गर्ने, किताब पढ्ने र पोजिटिभ फिल्म हेर्नुपर्छ । यो जिन्दगीभर नगरेको काम गर्ने समय हो । जीवन बदल्ने स्वर्ण काल हो । सबैले सदुपयोग गरौँ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ९, २०७६, ०१:२०:००